အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီက ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်သဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တစ်ဦး ပွဲချင်းပြီးသေဆုံး - Myanmar Pressphoto Agency
Bago Dead Myanmar Pregnant SAC Women
Women February 1, 2022 ·0Comment
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီက ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်သဖြင့် ကိုယ်ဝန် ( ၇ )​ လလွယ်ထားသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။
သေဆုံးသူသည် ပဲခူးမြို့ နန်းတော်ရာရပ်ကွက်၊ဆံတော်တွင်းလမ်းမ၊အင်းဝင် ၃ လမ်းထိပ်မှာနေထိုင်သည့် ကိုယ်ဝန်( ၇ )လလွယ်ထားသည့် အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် မချစ်ချစ်ထွန်းဖြစ်သည်။
ယမန့်နေည ၉နာရီခန့်က မချစ်ချစ်ထွန်းသည် သူမနေအိမ်ရှေ့ မတ်တပ်ရပ်နေစဥ် အင်းဝင်လမ်းအနီး ဆံတော်တွင်းလမ်းမပေါ်မှာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများ ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျောဘက်ဖောက်ဝင်ကျည်ဒဏ်ရာနှစ်ချက်ကြောင့် ဗိုက်ထိပြီး မျက်နှာဖြင့် ကျကာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း အခင်းဖြစ်နေရာအနီးတဝိုက်နေထိုက်သူများထံက သိရသည်။
“ကောင်မလေးက ငယ်သေးတယ်။စစ်တပ်ကပစ်တာသေချာတယ်။ဆေးရုံကို ပို့ကတည်းက အသက်မရှိတော့တာ။နယ်ခံသတင်းPageတွေကလဲ တပ်ကပါလို့ မပြောရဲကြဘူး”လို့ နန်းတော်ရာရပ်၊အင်းဝင်လမ်းနေထိုင်သူတစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
နေအိမ်ရှေ့မှာတင် သေဆုံးခဲ့ရသည့် မချစ်ချစ်ထွန်းဟာ သူမ​၏ ဖေ့စ်ဘုတ် လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားသည့် အလှဓာတ်ပုံအမှတ်တရပုံများတင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အားကျသူတွေ၊ဖြန့်ဝေသူတွေများပြားခဲ့ပြီး ယခုလအတွင်း လူသိများသည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။
သူမ​၏ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ဖော်ပြထားသည့် ပို့စ်တွေအရ သူမ​၏ကိုယ်ဝန်သည် ၇လကျော်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ဓာတ်မှန်အဖြေအရ သားယောကျာ်းလေးဖြစ်ကြောင်း နှင့် မတ်လ ၉ရက်နေ့မှာမွေးဖွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
သူမ သေဆုံးသည့်ရက်ဖြစ်သည့် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ရက်နေ့က သူမပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းတစ်ချို့ကို မီးဖွားစရိတ်ပိုမိုရရန် ရောင်းချလိုကြောင်း သူမ မသေဆုံးမှီ နာရီပိုင်းအလိုက ဖော်ပြခဲ့သေးည်။
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ လက်ချက်ကြောင့် မချစ်ချစ်ထွန်းသေဆုံးခဲ့ရသည့် ဆံတော်တွင်းလမ်းမ၊ အင်းဝင် ၃ လမ်းဟာ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ဧပြီလအတွင်းက အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ​၏ မတရားပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုကြောင့် အေးချမ်းစွာဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေသည့် ပြည်သူများ အသက်သေဆုံးခဲ့ရသည့် ပဲခူးမြို့အထင်ကရလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
​#အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ #ကိုယ်၀န်ဆောင်အမျိုးသမီး #သေဆုံး #MPA #ပဲခူး
Due to Terrorist SAC’s Arbitrary Shooting, Pregnant Woman Dead on Spot
A seven-month-long pregnant woman died due to the arbitrary shooting of the terrorist SAC.
The dead wasa23-year-old Ma Chit Chit Htun who was carryingaseven-month pregnancy and lived at the top of Inwin3street, Sandawtwin road of Bago city’s Nandawyar ward.
Last night at 9pm, Ma Chit Chit Htun died of two bullet wounds, from the arbitrary shooting of the terrorist SAC troops, which penetrated through the back to the stomach while she was standing in front of her house, she fell on her face and died on the spot, according to those who live close to the scene.
“The girl was still young. It was certainly shot by the military. She was already dead since delivered to the hospital. The local news pages dared not say it was from the military”, explained one who lives on Inwin street in Nandawyar ward.
Ma Chit Chit Htun, who was killed right in front of her house, becameawell-known woman this month after sharing her pregnant pictures on her Facebook social media which were widely liked and shared.
According to her posts, her pregnancy had been over seven months and according to the X-ray result, it wasaboy and due to be born on March 9.
Just hours before her death, on January 31, she had posted that she would like to sell some of her belongings to get more delivery expense.
Inwin3street of Sandawtwin road where Ma Chit Chit Htun died is where many peacefully protesting civilian lives were lost in the unjust shooting and arrest of the terrorist SAC in last April of 2021 and one of the famous roads of Bago city.
#TerroristSAC #PregnantWoman #Died #MPA #Bago